ကင်ဆာကြောင့်သေစရာမလိုတော့ပါဘူး ကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် မသေစေရ ကင်ဆာအဆင့် ၄ ကို အမြစ်ပါ မကျန်အောင် ဆွဲဖြတ်စေတဲ့ဆေး ။ - POPPIN NEW
August 2, 2019 ဗဟုသုတနှင့်ကျန်းမာရေး
ဒေါက်တာ HEAYTHY LIFE က ပြောတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ သေချာဂရုစိုက်ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမှ ကင်ဆာကြောင့်သေစရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့
ပထမအဆင့်က သကြားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောင်ပါ အဲဒါကင်ဆာဆဲလ်က အလိုလိုသေသွားပါလိမ့်မယ်
ဒုတိယအဆင့်က အစာမစားခင်မှာ သံပုရာတစ်လုံးကို ရေနွေးနဲ့ Blend လုပ်ပြီးသောက်ပါ( ၁)လ ကနေ သုံးလခန့် သောက်ပေးပါ …
Maryland College of Medicine ရဲ့ Research အရအဲလိုသောက်ပေးတာက ကင်ဆာဆဲလ်ကို ဓာတ်ကင်ကုသတာထက် အဆတစ်ထောင်ကောင်းတယ်တဲ့…
တတိယအဆင့်က အုန်းဆီစစ်စစ် သုံးဇွန်းကို မနက်တစ်ခါ ညတစ်ခါ သောက်ပေးပ
ကင်ဆာဆဲလ် အလိုလို ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီကုသနည်း နှစ်ခုကို သကြားလုံးဝရှောင်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
ဖိုသီဖတ်သီနေရင်တော့ ကင်ဆာဆဲလ်က သင့်ကို အနိုင်ယူသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒီဆေးနည်းက ကျွန်တော် ဖြန့်ဝေနေတာ ငါးနှစ်ရှိသွားပါပြီ ….
ဒါဆေးနည်းက ကင်ဆာကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးရတော့မဲ့ သူတွေအတွက် အလွန်အကျိုးရှိမှာပါ …..
တခြားသူတွေ သိအောင်လည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးပါ…..
Ignorance is no excuse; I have been sharing this information for over5years. Let everyone around you know, it’sasacrilege for anyone this day to die of cancer;. Forwarded as received.
နိင်ငံခြား ဆေး သုတသန မှ သိန်းဇော်
မိသားစုတိုင်း ကျမ်းမာ ကြပါစေ…..။
..(ကင်ဆာ ရောဂါဖြင့် မသေစေရ ကင်ဆာအဆင့် ၄ ကို အမြစ်ပါ မကျန်အောင် ဆွဲဖြတ်စေတဲ့ဆေး …)
“ကင်ဆာရောဂါဖြင့် မသေစေရ ” ကင်ဆာရောဂါကို အမြစ်တွယ်နေတဲ့ ကင်ဆာအဆင့် ၄ _ကို အမြစ်ပါ မကျန်အောင်စွဲဖြတ်စေတဲ့ ဆေး နဲ့ ဆေးမြစ်တွေပါ။
ဦးဏှောက်ကင်ဆာ အဆုတ်ကင်ဆာ အသဲကင်ဆာ အစာအိမ်အူမကြီးးကင်ဆာ သားအိမ်ကင်ဆာ ရင်သားကင်ဆာ လည်ချောင်းကင်ဆာ ပါးစောင်ကင်ဆာ
နှာခေါင်းကင်ဆာစတဲ့ ကင်ဆာအမျိုးမျိုးအား ဆေးသောက် မပျောက်ဖူးဆိုပါက အမြစ်ပါမကျန် ဒီဆေးတွေက ဖြတ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စားဆေးနဲ့ ဆေးမြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ၎င်းဆေး ဖော်ပြီးသား အမုန့်နဲ့ ဆေးမြစ်က တော့ ​အောက်ပါပုံက ဟာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဆေးမြစ်ကို ဆန်ဆေးရေနဲ့သွေးပြီး ဟင်းစားဇွန်းတဇွန်းတခါသောက် ညမနက်တနေ့ နှစ်ကြမ်သုံးကြိမ်လောက် သောက်ပါက ကင်ဆာအမြစ်များ
ကိုတဗြုတ်ဗြုတ်နဲ့မြည်အောင် စွဲဖြတ်ပြစ်မှာပါ ဆေးသောက်ပြီး သုံးရက်လောက်မှာတော့ ဝမ်းထဲမှာပူစပ်စပ်နဲ့ တမျိုးကြီးအနေရ နည်းနည်းခက်ပါတယ်။
source: ဆေး လွယ်အိတ်လေး ရန်ကုန်
ဒေါကျတာ HEAYTHY LIFE က ပွောတယျ ကိုယျ့ကိုကိုယျသာ သခြောဂရုစိုကျပေးနိုငျရငျ ဘယျသူမှ ကငျဆာကွောငျ့သစေရာမလိုတော့ပါဘူးတဲ့
ပထမအဆငျ့က သကွားလုံးဝ မစားပါနဲ့ ရှောငျပါ အဲဒါကငျဆာဆဲလျက အလိုလိုသသှေားပါလိမျ့မယျ
ဒုတိယအဆငျ့က အစာမစားခငျမှာ သံပုရာတဈလုံးကို ရနှေေးနဲ့ Blend လုပျပွီးသောကျပါ( ၁)လ ကနေ သုံးလခနျ့ သောကျပေးပါ …
Maryland College of Medicine ရဲ့ Research အရအဲလိုသောကျပေးတာက ကငျဆာဆဲလျကို ဓာတျကငျကုသတာထကျ အဆတဈထောငျကောငျးတယျတဲ့…
တတိယအဆငျ့က အုနျးဆီစဈစဈ သုံးဇှနျးကို မနကျတဈခါ ညတဈခါ သောကျပေးပါ…
အဲဒီကုသနညျး နှဈခုကို သကွားလုံးဝရှောငျပွီးတဲ့ နောကျပိုငျးမှာ လိုကျနာနိုငျပါတယျ။
ဖိုသီဖတျသီနရေငျတော့ ကငျဆာဆဲလျက သငျ့ကို အနိုငျယူသှားပါလိမျ့မယျ။
ဒီဆေးနညျးက ကြှနျတျော ဖွနျ့ဝနေတော ငါးနှဈရှိသှားပါပွီ ….
ဒါဆေးနညျးက ကငျဆာကွောငျ့ အသကျဆုံးရှုံးရတော့မဲ့ သူတှအေတှကျ အလှနျအကြိုးရှိမှာပါ …..
တခွားသူတှေ သိအောငျလညျး ပွနျလညျမြှဝပေေးပါ…..
နိငျငံခွား ဆေး သုတသန မှ သိနျးဇျော
မိသားစုတိုငျး ကမျြးမာ ကွပါစေ…..။
သင့်ကိုယ်သင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် မဖြစ်မနေလုိုက်နာရမယ့် အချက်များ
Pop Pin New May 8, 2019
Pop Pin New February 13, 2019